Efa nanaikitr’olona mihitsy izy ireo, hoy ny vaovao saingy avotra soa aman-tsara ireto farany. Nampandre ny mpitandro ny filaminana avy hatrany ny fokonolona noho io tranga io ka raikitra ny sava hao natao tamin’ireo voay. Raha tsiahivina, anisan’ny toerana be mpitsangatsangana i Ramena, indrindra fa rehefa faran’ny herinandro. Voatery niantsoana mpitandro ny filaminana izany ka ireo avy ao amin’ny 2 eme RFI no tonga niambina teny an-toerana. Tao Ampasira no nanombohan’izy ireo ny asa mitohy any amin’ny Montagne. Tanjona ny hiarovana ny ain’ny mponina, indrindra fa ireo ankizy efa zatra milalao ranomasina ao Ramena rehefa faran’ny herinandro. Mbola nitohy ny fikarohana ireo voay hatramin’ny fotoana nanoratanay omaly.